Pfupiso: Dzidza maitiro ekudzikisa hukuru hwefaira rePDF muLinux. Mairi nzira yekuraira uye nzira dzeGUI dzakurukurwa.
Ini ndanga ndichizadza imwe fomu yekunyorera uye yakakumbira kurodha magwaro anodiwa muPDF format. Haisi nyaya hombe. Ndakaunganidza ese akatariswa mifananidzo uye akaisanganisa ivo mune imwechete PDF achishandisa gscan2pdf chishandiso.
Dambudziko rakauya pandakaedza kurodha iyi faira rePDF. Kurodha kwacho kwakundikana nekuti kwakapfuura saizi yakanyanya kukura. Izvi zvaingoreva kuti ini ndaida kudzora size yefaira rePDF.
Zvino, unogona kushandisa yepamhepo PDF compressing webhusaiti asi ini handivimbe navo. Faira ine magwaro akakosha kurodha kune server isingazivikanwe haisi zano rakanaka. Iwe haungambove nechokwadi chekuti ivo havachengeti kopi yako yakapihwa PDF gwaro.
Ichi ndicho chikonzero nei ini ndichifarira kumanikidza mafaera ePDP pane system yangu pane kuiseya kune mamwe asina kunaka server.
Mune ichi chinodzidzisa chimbichimbi, ini ndinokuratidza maitiro ekudzora hukuru hwePDF mafaira muLinux. Ini ndinoratidza ese maviri mutsetse wegwara uye nzira dzeGUI.
Maitiro 1: Deredza refaira rePDF muLinux command line
Unogona kushandisa Magnificentcript command mutsara chishandiso chekumanikidza file rePDF. Yakanyanya kugoverwa kweLinux inosanganisira iyo yakavhurwa sosi vhezheni yeGuostscript kare. Nekudaro, iwe unogona kuramba uchiedza kuiisa kuti uve nechokwadi.
PaDebian / Ubuntu yakagoverwa kugovera, shandisa inotevera mirairo yekuisa Ghostscript:
Iye zvino zvawaita kuti uve nechokwadi chekuti Ghostscript yakaiswa, unogona kushandisa chinotevera kuraira kuti udzikise saizi yefaira rako rePDF
Mune iwo murayiro wepamusoro, iwe unofanirwa kuwedzera iyo nzira yekukodzera uye kunze kwefaira rePDF.
Iwo iwo murairo unoratidzika unotyisa uye unovhiringidza. Ini ndinopa kuraira nekuteedzera zvakanyanya zvacho. Izvo zvaunofanirwa kuziva ndeye dPDFSETTINGS paramende. Izvi ndizvo zvinotema danho rekumanikidzira uye nekudaro mhando yeiyo yako yakamanikidzwa PDF faira.
/ prepress (default) Yakakwirira mhando kuburitsa (300 dpi) asi yakakura saizi
/ ebook Yepakati nepakati yekubuditsa (150 dpi) ine mwero kuburitsa faira rakakura
/ screen Yakaderera yemhando yakabuda (72 dpi) asi idiki diki inogona kubudiswa faira
Ramba uchifunga kuti mamwe mafaera ePDP anogona kunge asina kumanikidzwa zvakanyanya kana zvachose. Kunyorera kumanikidzwa pane mamwe mafaera ePDF kunogona kunyange kuburitsa faira rakakura kupfuura rekutanga. Iko hakuna zvakawanda iwe zvaunogona kuita mune zvakadaro zviitiko.
Nzira 2: Dzvinyirira mafaera ePDF muLinux uchishandisa GUI chishandiso
Ini ndinonzwisisa kuti havasi vese vagadzikane ne command line tool. The Vaperekedzi vePDF muLinux hazvibatsire zvakanyanya nekumanikidza. Ichi ndicho chikonzero isu paIyo FOSS takashanda kugadzira iyo GUI vhezheni yeGurostscript mirairo yawakaona pamusoro.
Machira kubva kuIyo FOSS timu yakashanda mukugadzira Python-Qt yakavakirwa GUI wrapper yeiyo iGmitscript. Chishandiso chinokupa iwe UI yakapfava kwaunogona kusarudza yako faira yekukodha, sarudza chikamu chemanikidzwa uye tinya pane compress bhatani kutsikisa iyo faira rePDF.
Iyo yakamanikidzwa faira rePDF rinoponeswa mufaira imwechete neyepakutanga faira rePDF. Faira yako yepakutanga yePDF inoramba isina kubatwa. Iyo faira yakamanikidzwa inonyoreswa zita neyakaiswa -inomanikidzwa kuzita rekutanga refaira.
Kana iwe usingagutsikane nekumanikidzira, unogona kusarudza imwe chiyero chekumanikidza uye unomanikidza iyo faira zvakare.
Iwe unogona kuwana iyo inowanikwa kodhi yePDress Compressor pane yedu GitHub repository. Kuti tikure uite nyore kushandisa mudziyo, isu takarongedza muAppImage fomati. Ndapota rezvera kuchiratidzo ichi kuti uzive mashandisiro ekushandisa AppImage.
Dhawunirodha PDF Compressor (AppImage)
Ndokumbirawo ziva kuti chishandiso chiri mumatanho ekutanga ezviitiko. Unogona kusangana nezvimwe nyaya. Kana iwe uchidaro, ndapota tizivisei mune zvakataurwa kana kunyange zviri nani, faira bug apa.
Tichaedza kuwedzera mamwe mapakeji (Snap, Dhe, PPA nezvimwe) mune ramangwana rinoburitswa. Kana iwe uine ruzivo nekusimudzira uye kurongedza, ndapota inzwa wakasununguka kutipa ruoko.
Iwe ungade here kuti Iyo FOSS timu ishandire mukugadzira zvimwe zvidiki zvidiki desktop zvishandiso mune ramangwana? Mhinduro dzako nemazano zvinogamuchirwa.
Maitiro eZip uye Unzip Mafaira NeGzip paLinux
20+ Mahara eBooks Kudzidza Linux Mahara